detection - Synonyms of detection | Antonyms of detection | Definition of detection | Example of detection | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for detection
Top 30 analogous words or synonyms for detection
Access method အချက်အလက်များကို main storage နှင့် I/O device များအကြား ပေးပို့သည့် နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ System Network Architecture တွင် ၎သည် software တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွန်ရက်၏ information စီးဆင်း သွားလာမှုတွင် ထိန်းချုပ်ပေးသည်။ ဤစကားလုံးကို နည်းစနစ်တစ်ခုအတွက်လည်း အသုံးပြုသည်။ ဥပမာ Token/Collision Detection CSMA/CD တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းအား ကွန်ရက်၏ node များက မည်သည့်အစီအစဉ် မည်သို့ ချိတ်ဆက်ရမည်ကို ထိန်းချုပ်ပေးသည်။
သွေးတိုးရောဂါ သွေးဖိအားကို မီလီမီတာ မာကျူရီ ယူနစ်ဖြင့် တိုင်းတာပြီး နှလုံးကြွက်သား ညှစ်ထုတ်စဉ် သွေးကြောအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော ဖိအားကို အပေါ်သွေး (Systolic Blood Pressure) ဟု ခေါ်ပြီး၊ နှလုံးကြွက်သား မူလအတိုင်း ပြန်ဆန့်စဉ် ဖြစ်ပေါ်သော ဖိအားကို အောက်သွေး (Diastolic Blood Pressure) ဟုခေါ်သည်။ သွေးတိုးရောဂါ ရှိမရှိကို နားလည် တတ်ကျွမ်းသော ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများဖြင့် အလွယ်တကူ စစ်ဆေးနိုင်ပြီး အစားအသောက် အနေအထိုင် ပြုပြင်၍ ဆေးဝါး စနစ်တကျ သုံးစွဲပါက ရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ "The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure" (JNC7) ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သွေးတိုးရောဂါကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြား သတ်မှတ်ထားသည်။
ဘီ-၂ ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် For safety and fault-detection purposes, an on-board test system is interlinked with the majority of avionics on the B-2 to continuously monitor the performance and status of thousands of components and consumables; it also provides post-mission servicing instructions for ground crews. In 2008, many of the standalone distributed computers on board the B-2, including the primary flight management computer, were being replaced byasingle integrated system.
ဘီ-၂ ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် The escalating cost of the B-2 program and evidence of flaws in the aircraft's ability to elude detection by radar, were among factors that drove opposition to continue the program. At the peak production period specified in 1989, the schedule called for spending US$7 billion to $8 billion per year in 1989 dollars, something Committee Chair Les Aspin (D-WI) said "won't fly financially." In 1990, the Department of Defense accused Northrop of using faulty components in the flight control system; the threat posed by bird ingestion potentially damaging engine fan blades also required redesigning.
ဘီ-၂ ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် ဘီ-၂ အား ယခင်ဗုံးကြဲလေယာဉ်များထက်ပိုမိုထိရောက်စေရန်အတွက် ယင်းဒီဇိုင်းတွင် ခေတ်ပါ်ပျံသန်းခြင်းနည်းစနစ်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။, these have been modified and improved in light of the switch to conventional warfare missions. The B-2 features the low probability of intercept AN/APQ-181 multi-mode radar,afully digital navigation system that is integrated with terrain-following radar and Global Positioning System (GPS) guidance, andaDefensive Management System (DMS) to inform the flight crew against possible threats. The onboard DMS is capable of automatically assessing the detection capabilities of identified threats and indicated targets.